दोस्रो पटक पनि बस्न सक्छ गर्भ के गर्भावस्थाको बेला ?
नेपाल अन्लाईन पत्रिका – काठमाडौं। के कुनै महिला गर्भवती हुँदा हुँदै फेरि भ्रुण ग्रहण गर्न सक्छ ? यदि तपाईंले गर्भावस्थाको केही हप्तापछि भ्रुण गर्भाशयमा पुनः प्रत्यारोपण गर्ने कुरा आयो भने तपाईंको प्रतिक्रिया के हुन्छ ? मेडिकल भाषामा यसलाई सुपर फिटनेस प्रेगनेन्सी या डबल प्रेग्नेन्सी पनि भन्ने गरिन्छ । **यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु **